🥇 ▷ Xiaomi Mi 9T Pro dib u eegis ✅
Xiaomi Mi 9T Pro dib u eegis
Xia-dhexe ee ‘Xiaomi Mi 9T’ waxay ina siineysaa isku dheelitirnaan ka kooban qaybo tayo tayo leh, naqshad heer sare ah iyo qiimo qaali ah. Nooca Pro ayaa lagaga dhawaaqay Boqortooyada Midowday (UK) iyo Yurub, isaga oo ku beddelaya Snapdragon 730 kumbuyuutarka flagship ee Snapdragon 855, isla markaana dhisaya 27W nidaamka degdegga ah ee kululaynta garaafka garaafka.
Halka laga iibsado Mi 9T Pro gudaha Boqortooyada Midowday
Hadda wuxuu u dhow yahay walaalkiis, calanka Mi 9, laakiin qiimuhu waa £ 100 oo ka raqiisan qiimo dhan £ 399 oo toos uga socda Xiaomi.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa taleefankan iyada oo loo marayo GearBest, oo ay hadda ku jiraan nooc 64GB ah oo ah £ 358.19 oo ah Carbon Black, Flame Red, ama Glacier Blue.
Yurub gudaheeda waxaad si toos ah uga bixin doontaa € 399 ka Xiaomi, ama € 449 € 128 GB oo kayd ah.
Sidoo kale eeg: telefoonka ugu wanaagsan ee Xiaomi
My 9T Pro Dhismaha & Naqshadeynta
U siman qaabaynta naqshadda Mi 9T, Pro inta badan waa soo bandhigid. Tani waa cabbir sare oo leh 6.39in cabir AMOLED ah oo tayo sare leh, waana mahadsantahay kamarada soosaara, kamaradan lama taaban karo, taasoo dhalisay cabir xagga jirka ah oo ah 91.9%
Mi 9T Pro waxay dareemeysaa inay ku wanaagsan tahay gacanta, oo leh qalabka sawirka faraha ayaa si toos ah shaashadda ugu xiran. Waxaad kaloo isticmaali kartaa kamarad selfie si aad u dalbato furitaanka wajiga.
Cidhifka qalooca ee dhabarka ayaa ku habboon naqshad debecsan oo ka dhigaysa Pro isla markiiba loo aqoonsan karo sida taleefanka Mi. Qaybta kamarada gadaal dhif ayey jirka uga soo baxdaa, inkasta oo aad isticmaasho dacwada la keenay, arintaan kuma arki doontid xaalad kasta. La’aanta kiiska Pro waxay noqon kartaa wax yar oo siif leh.
Badhanka awooda, oo ku yaal dhinaca midig ee taleefanka, waa casaan, kaas oo kuu fududeynaya in la helo, laakiin wuxuu ku darayaa taabasho fasalka. Faahfaahinta sida xaqiiqda ah in batoonka dhaqdhaqaaqa shaashadda, oo ku yaal dhinaca midig, uu casaan yahay, ayaa kuu sahlaysa in la helo.
Wax aan jecel nahay oo ku saabsan Mi 9T, oo sidoo kale ku jira qaabkan Pro, waa soo-gelinta jaakadda mashiinka madax-weynaha ee 3.5mm. Markaad eegto chassis-ka waxaad sidoo kale ka heli doontaa shaambada SIM-ga oo ay ku jiraan bareelo iyo xiriiriyaha USC-C.
Baytariyada jaban ee 4,000 mAh, in kasta oo ay tani culeys ku kordhiso aaladda. Cufnaanta 8.8mm iyo 191g, marka waad ku arki doontaa jeebkaaga.
Guud ahaan, oo leh dhammaan taleefannada Xiaomi, Mi 9T Pro wuxuu kiciyaa xallinta shaashadda sare ee ‘HD + 2340 × 1080 pixels’. Lagu dhejiyay 6.39 inji, tani waxay soo saartaa cufnaanta pixel fiiqan ee 403ppi.
Marka la barbar dhigo Mi A3 ee dhawaantan la shaaciyay (mar labaad, Yurub), oo leh shaashad HD + oo leh xallinta 1560 × 720 pixels, farqiga ayaa isla markiiba muuqda.
Qalabka Miisaaniyadda iyo Bandhigga Mi 9T Pro
Iyada oo farqiga ugu weyn ee u dhexeeya processor-kiisa iyo heerka Mi 9T, ay tahay wax xiiso leh in la arko sida labada taleefan ay isbarbar dhigaan astaamaheena.
Waxaan ogaanay in Snapdrgaon 855 ee halkan lagu xushay uu balan qaadayo wax qabad la taaban karo iyo waxqabadka la qiyaasi karo ee Snapdragon 730 Mi 9T. Geekbench 4 waxaan duubnay dhibco badan oo ah 10,578 dhibcood Pro, marka loo barbar dhigo 7,018 heerka.
Qaabka adduunka dhabta ah, farqiga u yar ayaa laga dareemi karaa, dabcan. Soosaarista dalabka iyo badhanka menu waxay umuuqdaan kuwo aad u lamid ah, laga yaabee inay sabab u tahay nidaamka hawlgalka xun
Haddii cayaaraha casriga ahi ay yihiin waxaaga, nooca Pro waa mid loo baahan yahay. Kaliya maahan in uu leeyahay processor-ka dhaqso leh iyo garaafyo hagaagsan, waxaa sidoo kale jira nidaam siddeed lakab oo lakab ah oo cabbir leh si uu kaaga caawiyo ka saarista kuleylka gudaha.
Mid ka mid ah awoodaha Mi 9T Pro marka la barbar dhigo moodalka caadiga ah waa taageeradiisa ujrada dhakhse ee 27W. Si kastaba ha noqotee, xamaamka ku jira xirmada ayaa leh ugu badnaan 18 W, sidaa darteed haddii aad rabto inaad isticmaasho, waa inaad gacantaada gelisaa jeebkaaga oo aad iibsataa adaweeysi dhakhso leh.
Ka soo qaad inaad haysato 27W xeedho, waa inaad aragtaa Pro oo ah eber illaa 60% nus saac gudahood.
Ka sokow kumbuyuutarkeeda flagship-ka, tanina wali waa taleefanka dabaqadda dhexe, marka la yaab ma ahan in My Wireless Charge 9 uusan taleefankii soo deynin.
My 9T Pro Camera and Photography
Waxaad ka heli doontaa isla isla saddex-lens AI camera halkan sida Mi 9T, taasoo la micno ah in lenska 48 48Mp lens Prime uu la socdo muraayad telefishanka 8Mp ah iyo muraayad xagal ballaadhan oo 13Mp ah.
Waxay awood u leedahay qabashada qadar aad u faahfaahsan, laakiin waxaad dhab ahaantii arki doontaa muuqaal ka fiican haddii aad u oggolaato inuu isticmaalo tikniyoolajiyad isku-xireysa pixel ah si loogu daro afar pixels mid; In kasta oo ay suurtagal tahay in la qabto 48Mp, Suuragal maahan in si dhab ah loo qabto sawirrada cabbirkan.
Codsi kamarad dareen leh, oo leh noocyo kala duwan iyo miirayaal ayaa la soo bandhigay. Xaqiiqdii, waa sax sida aad ku hesho Mi 9T.
Pro wuxuu bixiyaa isku-dheelitir cad oo xoogaa yar oo faahfaahin dheeraad ah lagu daray iftiinka hooseeya, laakiin farqiga halkan waa runti aad u yar.
Kaamirooyinka Selfie sidoo kale waxay u baahan yihiin taxadar. Tani waxay lamid tahay tan laga helay Mi 9T, oo adeegsada hab cadaalad ah oo xasilloon laakiin wali waa shabakad uu Xiaomi sheegay inay kufiican tahay 300,000 wareeg.
Waxaan walaacyo isku mid ah ka qabnaa kaamirooyinkaan sida aan ula dhaqanno walaalihiis, gaar ahaan xaqiiqada ah in kaamiradu waqti dheer qaaddo oo ay diyaar u ahaato sawir qaadista, taasna si otomaatig ah ayey u xiiso yeelan doontaa markaad aragto sawirka, xitaa haddii aad tahay kamarad laguma sameyn marka hore. .
Muunadeena dib u eegista Mi 9T Pro waxay maamushaa MIUI 10.3.1 kaas oo nooc gaar ah u ah Android 9.0 Pastel
Waxaan nahay taageereyaasha MIUI, gaar ahaan astaamaha sida ‘Dark Mode’ ee nidaamka oo dhan, oo aan lagu dabaqi karin heerka caadiga ah ee Android illaa kii ugu dambeeyay ee Android 10.
Waxaad sidoo kale ka heli doontaa muuqaalo u gaar ah sida awooda lagu socodsiyo codsiyado fara badan isla markaana aad meel labaad taleefanka ku diyaarsato, iyo sidoo kale xulashooyinka biraawsarka raadraaca.
Gunaanad My Pro 9T
Haddii waxqabadka yahay wax walba, lacag yar oo ka badan heerka caadiga ah ee Mi 9T, waxaad heli doontaa processor Snapdragon 855, kaas oo ah isla kan laga helay taleefannada dusha sare sida Xiaomi 9 Mi iyo OnePlus 7. Sidoo kale waxaa jira deeqsi baytariga. 4,000 mAh.
My 9T wuxuu dhaliyay dhibco loogu talagalay mashiinka taleefanka madaxa ee 3.5mm iyo waxqabadka NFC, waxaanan jecel nahay naqshada shaashadda oo dhameystiran oo leh kamarad soosaara. Kaameerada ugu weyn ayaa waliba ah mid aad u fiican.
Haddii waxqabadka iyo cayaaraha aysan aheyn waxaaga, badbaadi naftaada xoogaa lacag ah oo u gudub heerka Mi 9T.
Dib-u-eegiddan ayaa laga soo qaatay nooca asalka ah ee Alfonso Casas websaydka walaasheen PCWorld Spain.
Xusuusin: Waxaan heli karnaa komishan markaad iibsaneyso isku xirka boggayaga, kharash dheeraad ah oo adiga kugu baxa. Tani wax saameyn ah kuma yeelanayso madax-bannaanida tifaftirkayada. Baro mar labaad.